Ubani ozoba umqeqeshi wamaBhokobhoko?
Obengumqeqeshi wamaSpringboks uRassie Erasmus, oqokwe njengomqeqeshi wonyaka, usememezele ukuthi uyashenxa esikhundleni kodwa akawushiyi umbhoxo wakuleli njengoba esezokuba usomaqhinga weSouth African Rugby Union (Saru). Isithombe: Mike Hutchings/Reuters
Mthokozisi Mncuseni | November 8, 2019
NJENGOBA kuqhubeka imibhiyozo ngempumelelo yamaBhokobhoko emadolobheni ahlukene eNingizimu Afrika, abasondelene nalo mdlalo bayazibuza bayaziphendula ukuthi ubani ozoqhuba le nqola njengoba uRassie Erasmus esehlile esikhundleni sokuqeqesha ompetha bomhlaba?
U-Erasmus, oqokwe njengomqeqeshi wonyaka, usememezele ukuthi uyashenxa esikhundleni kodwa akawushiyi umbhoxo wakuleli njengoba esezokuba usomaqhinga weSouth African Rugby Union (Saru).
Ngesikhathi efika noSiya Kolisi ngoLwesibili, ukuvezile ukuthi uzoba nesandla ekuqokweni komqeqeshi omusha futhi uzosebenza naye eduze.
“Manje isikhathi sokuthi ngibuyele emsebenzini engangiwushiyele phesheya kwezilwandle. Kusemqoka kimina ukuthi ngibuyele esikhundleni sokuba usomaqhinga ngoba kufanele sisebenze nakakhulu ukuvula wonke amathuba kubadlali abafanele, kungakhathalekile ibala labo nokuthi bafunda kuziphi izikole,” usho kanje * -Erasmus.
Umbuzo omkhulu uthi ubani ozongena ezicathulweni zakhe? Ngokwabazazi zonke ezeSaru, uJacques Nienaber, obegxile ekusebenzeni amaqhinga okuvimba izitha eJapan, uyena othishwe ukuthi athathe lesi sikhundla. U-Erasmus noNienaber basuka kude yingakho kungeke kwethuse uma kuba uyena othatha lo msebenzi. Basebenze ndawonye kusukela ngeminyaka yabo-1990.
Bebendawonye kwiFree State Cheetahs, DHL Stormers kanti nakwiMunster yaphesheya kwezilwandle bebesebenza ndawonye njengoba sebedla isicoco somhlaba. Ayavela namagama kaMat Proudfoot, obeqeqesha abadlali baphambili eJapan, kanjalo noMzandile Stick obepheka abasemuva.
Kwabangekho esikimini sika-Erasmus ebesiseJapan kodwa nabo abazobhekwa, kukhona amagama oJohan Ackermann, Johan van Graan noHeyneke Meyer. Likhona negama likaDeon Davis ongomunye wabaqeqeshi azifelayo ngabo * -Erasmus. Uke wamsebenzisa ngisho kusalungiselelwa iNdebe yoMhlaba.
Kwenzeka konke lokhu nje, abadlali bamaBhokobhoko kukhonye bona ngesikhathi sekukhethwa isikimu sabadlali abebevelele kwiNdebe yoMhlaba. Kubadlali abangu-15 abaqokiwe, abaseNingizimu Afrika bayisishiyagalombili. BangoBeast Mtawarira, Bongi Mbonambi, Pieter-Steph du Toit, Duane Vermeulen, Faf de Klerk, Handre Pollard, Damiel de Allande noCheslin Kolbe.